Baydhabo:-Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay qaraxaas ayaa waxaa lagu weeararay ciidamo ka tirsan DFKM kuwaas oo marayey suuq ku yaalla bartamaha magaalada Baydhaba gaar ahaan qaybta qudaarta iyo hilibka .
Qaraxa Miinada ayaa waxaa uu khasaaro leh dhimasho iyo dhaawac soo gaarsiiyey ciidamo ka tirsan DFKM iyo dad rayid ah oo suuqa ku sugnaa waxaan ay ilaa haatan ay dhimashadu gaareysaa ilaa 13 qof waxaana dhaawaca uu sii marayaa ilaa 30 kale.
Gudoomiyaha Baarlamaanka DFKM Shariif Xasan Sheekh Aden ayaa eedeyn u soo jeediyey Ururka Al-Shabaab isaga oo ku eedeeyey in ay shaqo ka dhigteen in ay laayaan dadka dhacabka .
Sidoo kale Raisulwasaaraha DFKM Cabdiweli maxamed Gaas ayaa isgana ka hadlay caawa qaraxii ka dhacay magaalada Baydhabo isaga oo tacsi u diray eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay magaalada Baydhabo.
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay ayaa dhawaan waxaa la wareegay ciidamada Itoobiya iyo kuwa DFKM waxaana sidoo kale gaaray isbuucii la soo dhaafay 100 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM.